Still no justice for Aung San Suu Kyi
Today, Friday June 19, is the 64th birthday of Aung San Suu Kyi. The fact that she remains under arrest is tragic for Burma and for all those throughout the world who believe in democracy and the rule of law.
The trial of Aung San Suu Kyi is an absurd mockery of justice. The real injustice was not that someone broke into her compound, but that she was imprisoned in the first place.
Aung San Suu Kyi has now been imprisoned for 13 of the last 19 years since the party she led won the last elections in her country. More than 2,000 others are imprisoned across Burma for sharing her commitment toabetter and brighter future for the long-suffering population.
Even in the face of such injustice, Aung San Suu Kyi has always supported the path of peace and reconciliation. But the regime has consistently spurned her offer of dialogue and reconciliation. They want to isolate her from the people of Burma, for whom she has long beenasymbol of hope and defiance.
The growing sense of outrage and the unity of the international community behind this message should markaturning point. The regime is atacrossroads. Long-promised elections in 2010 will remainacharade while political prisoners are being tortured, ethnic minorities are persecuted, the media muzzled, freedom of speech and assembly are non-existent and Aung San Suu Kyi is silenced.
The regime can choose to ignore the clamour for change. But this will only condemn the country to deeper isolation, poverty, conflict and despair.
Some may question why Burma warrants so much attention. There are other countries where human rights are ignored or people live in poverty. But the Burmese junta stands virtually alone in the scale of its misrule and the sheer indifference to the suffering of its 50 million people.
How we respond to this injustice will sendamessage about our resolution to tackle similar injustices across the globe.
Mr Brown is the British prime minister.
နေ့စဉ်သတင်းများ (၁၈- ၆- ၀၉)
■ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ မွေးနေ့အခမ်းအနားများ ပြည်တွင်းပြည်ပမှာ ကျင်းပ သတင်း
■ ကရင်တပ်များ ဆုတ်ခွာနေရ သတင်း
■ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို လွှတ်ပေးဖို့ ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း တောင်းဆို သတင်း
■ ဥရောပပါလီမန်ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အမှုကို ဝေဖန်ရှုတ်ချ သတင်း
■ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေ ဘန်ကီမွန်းနဲ့ တွေ့ခွင့်ရဖို့ မျှော်လင့် သတင်း
■ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လွတ်မြောက်ရေး တီရှပ်လှုပ်ရှားမှု ဆင်နွှဲ သတင်း
■ ဗိုလ်မှူးချုပ်အုန်းမြင့်မှ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲအတွက် ရွာသားများကို စည်းရုံးရာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အ ကြောင်း ထည့်သွင်းပြောကြား သတင်း
■ ကေအန်ယူတပ်ဖွဲ့တွေ စခန်းတချို့က ဆုတ်ခွာ သတင်း
■ နေရာအချို့မှ တပ်များဆုတ်ပေးလိုက်ကြောင်း ကေအန်ယူ အတည်ပြု သတင်း
■ ကေအိုင်အေ ကချင်တပ်ဖွဲ့နဲ့ ၀တပ်ဖွဲ့တွေ စစ်ရေးလေ့ကျင့်ပြင်ဆင် သတင်း
■ ဒဏ်ရာရ စစ်အစိုးရတပ်သားများအတွက် ကေအန်ယူ စိုးရိမ် သတင်း
■ ပေါက်ကွဲစေနိုင်သော ပစ္စည်းတွေ့မှုဖြင့် NLD လူငယ် (၃) ဦးကို စွဲဆို သတင်း
■ ပါတီလူငယ် (၃) ဦးကို ဖောက်ခွဲမှုဖြင့် အမှုဖွင့် သတင်း
■ ထောင်ဒဏ် (၆၅) နှစ်ကျ မသက်သက်အောင် ကျန်းမာရေးဆိုးရွားနေ သတင်း
■ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ကိုလှမျိုးနောင် မျက်စိအန္တရာယ် ကြုံတွေ့နေရ သတင်း
■ မွန်ပြည်နယ်အတွင်း တုပ်ကွေးရောဂါဖြစ်ပွားသူ များပြားလာ သတင်း
■ ထိုင်းငံသားများက မြန်မာအလုပ်သမားကို လိုက်လံသတ်ဖြတ်ပြီး မိသားစုများအား ဖမ်းဆီး သတင်း
■ အမျိုးသားရင်ကြားစေ့ဖို့လိုကြောင်း တရုတ်ဝန်ကြီးချုပ် ပြောကြား သတင်း
■ မြန်မာနိုင်ငံအခြေအနေ ထိုင်းပညာရှင်များ အထူးစိုးရိမ် သတင်း
■ မုန်တိုင်းသင့်ပြည်သူများကို ကူညီနေသည့် NGO တချို့ ဗီဇာသက်တမ်း တိုးမရ သတင်း
■ နော်ဝေ ၀န်ကြီးချုပ်ဟောင်းနှင့် မြန်မာ့နိုင်ငံရေး ဆက်သွယ်မေးမြန်းချက် သတင်း
Posted by ၀ိမုတ္တိ at 8:55 AM ,0comments
ကရင်ဒုက္ခသည် ၄,၀၀၀ ခန့် မြန်မာနိုင်ငံ အရှေ့ပိုင်းရှိ သူတို့၏ နေရပ်ရင်းကို စွန့်ခွာ၍ ထိုင်းနိုင်ငံတွင်းသို့ ထွက်ပြေး ခိုလှုံလာ ကြသည်ဟု သတင်းများ ထွက်ပေါ်လာခဲ့သည်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လွတ်မြောက်ရေး အတွက် နိုင်ငံတကာမှ ဖိအားများ တိုးတက် များပြားလာနေသည့် အချိန်တွင် ဤသတင်း ထွက်ပေါ်လာခြင်း ဖြစ်သည်။
လွန်ခဲ့သည့် အပတ်မှစ၍ မြန်မာစစ်တပ်နှင့် ၎င်းတို့၏ မဟာမိတ် လက်နက်ကိုင် တပ်ဖွဲ့များ ဖြစ်ကြသည့် တိုးတက်သော ဗုဒ္ဓဘာသာ ကရင်အမျိုးသား တပ်ဖွဲ့ (DKBA)များက ကရင်အမျိုးသား လွတ်မြောက်ရေး တပ်မတော် (KNLA) ၏ တပ်မဟာ (၇) ဌာနချုပ်နှင့် ၂ မိုင်ခန့် အကွာအဝေးတွင် ရှိနေသည့် ပြည်တွင်းရွှေ့ပြောင်း ထွက်ပြေး နေကြရသော ဒုက္ခသည်များ ခိုလှုံနေရာ လာပါဟား စခန်းကို လက်နက်ကြီးများဖြင့် ပစ်ခတ်ခဲ့ကြသည်။
စခန်းကိုစွန့်ခွာ၍ ဒုက္ခသည်များက သောင်ရင်းမြစ်ကို ဖြတ်ကျော်ကာ ပြီးခဲ့သည့် သောကြာနေ့တွင် ထိုင်းနိုင်ငံတွင်းသို့ ခိုလှုံ လာခဲ့ကြသည်။ ကရင်သတင်း ဌာနများ၏ အဆိုအရ ထိုင်းအစိုးရက ယခုအသစ် ခိုလှုံလာကြသူများကို အတည်တကျ ဖြစ်နေပြီး ဖြစ်သည့် ဒုက္ခသည် စခန်းများတွင်း လက်ခံရန် တွန့်ဆုတ်နေကြဆဲဟု သိရသည်။ ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ်ရှိ မဲဆောက်မြို့ နှင့် ၆၂ မိုင် (ကီလို ၁၀၀) အကွာ အဝေးရှိ ထဆောင်ယန်း ခရိုင်ရှိ ဘုန်းတော်ကြီး ကျောင်းများအတွင်း၌သာ ယာယီလက်ခံ ထားခဲ့သည်။
ပုံမှန်အားဖြင့် ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်သာ ထိုးစစ်ဆင်လေ့ရှိသော မြန်မာစစ်တပ်၏ ယခု မိုးရာသီ ထိုးစစ်မှာ ပုံမှန် မဟုတ်ပါ။ ထိုင်းအစိုးရက ပစ်တင် ဝေဖန်မှုများကို တုံ့ပြန်မှု အဖြစ် ပြုခဲ့ပုံရသည်။
လက်ရှိ အာဆီယံအဖွဲ့၏ အလှည့်ကျ ဥက္ကဋ္ဌ တာဝန်ယူနေရသူ ထိုင်းနိုင်ငံက ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည် အပေါ် ခုံရုံးတင် တရားစွဲဆို စစ်ဆေးနေမှုနှင့် ပတ်သက်၍ မေလ ၁၉ ရက်နေ့တွင် တရားဝင် ထုတ်ပြန် ကြေညာခဲ့ရာ မြန်မာစစ်အစိုးရ အတွက် အမျက်ထွက်စရာ ဖြစ်စေခဲ့သည်။ မြန်မာ စစ်အစိုးရပိုင် မြန်မာ့အလင်း သတင်းစာတွင် တုံ့ပြန် ရေးသားခဲ့ရာ၌ ထိုင်းနိုင်ငံကို ပစ်တင် ဝေဖန်ခဲ့ပြီး ယခု ထုတ်ပြန် ကြေညာချက်သည် "ပြည်တွင်းရေးကို ၀င်ရောက် စွက်ဖက်ရာ ရောက်စေ သည်"ဟု ဖော်ပြခဲ့သည်။
မြန်မာစစ်အစိုးရ၏ အဆင့်မြင့် သံအရာရှိများကလည်း တဖြည်းဖြည်း မြင့်မား လာနေသည့် နိုင်ငံတကာ ဖိအားအပေါ် တန်ပြန် သံတမန်ရေး ထိုးစစ်များ ပြုလာခဲ့သည်။ နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီး ဦးဉာဏ်ဝင်း၊ ၎င်း၏ လက်ထောက် ဒု နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီး ဦးမောင်မြင့်၊ ဒု ကာကွယ်ရေး ၀န်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်အေးမြင့်တို့က ဒေသအတွင်းရှိ မတူကွဲပြားသည့် အစည်းအဝေးများတွင် တက်ရောက်ရင်း သူတို့ စစ်အစိုးရ၏ "ပြည်တွင်းရေး" ကို ၀င်ရောက် မစွက်ဖက်ကြပါရန် ပြောကြားခဲ့ကြသည်။
နိုင်ငံတကာနှင့် ဒေသတွင်းနိုင်ငံများမှ ဖိအားများ လျော့ပါးသွားမည့်ဟန် မရှိသည်ကို သိရှိကြသည့် အတွက် ကြောင့်လည်း စစ်အစိုးရက ထိုင်းနိုင်ငံရှိ ဒီမိုကရက်တစ် ပါတီ ဦးဆောင်သည့် အစိုးရအား သတိပေးမှု အနေဖြင့် ကရင်ဒုက္ခသည်များကို ထိုးစစ်ဆင်ပြခြင်း ဖြစ်ဟန်တူသည်။
ထိုင်းနိုင်ငံရှိ လက်ရှိ ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီဦးဆောင်သည့် ညွန့်ပေါင်းအစိုးရက မြန်မာနိုင်ငံ ဒီမိုကရေစီ အရေးကို ထောက်ခံကြောင်း သိထားသည့် အလျောက် မြန်မာ စစ်အစိုးရက လက်ရှိ ထိုင်းအစိုးရနှင့် ပတ်သက်၍ ကသိကအောင့် ဖြစ်နေရပါသည်။ ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ၏ မြန်မာပြည်ရေးရာ မူဝါဒကိုလည်း မကျေလည်လှပါ။ ထိုင်းနိုင်ငံ၏ နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီးအသစ် ကဆစ် ပီရုမ်း(Kasit Piromya) ကလည်း လွန်ခဲ့သည့်နှစ်က "ဘယ်လို လူမျိုးမဆိုရဲ့ စီးပွားရေး သဘောတူညီချက်တွေ ရှိထားတာကြောင့် ကျနော်တို့နိုင်ငံရဲ့ နိုင်ငံခြားရေး မူဝါဒအပေါ် သက်ရောက်မှု ရှိစေမှာ မဟုတ်ဘူး၊ ကျနော်တို့ အစိုးရက စီးပွားရေးနဲ့ နိုင်ငံရေးကို ရောထွေးပစ်မှာ မဟုတ်ဘူး"ဟု ပြောခဲ့ဖူးသည်။
နေပြည်တော်ရှိ မြန်မာစစ်အစိုးရက ထိုင်းနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင် ယခင် ၀န်ကြီးချုပ်ဟောင်း သက်ဆင် ရှင်နာဝတ်ထရာ (Taksin Shinawatra) လက်ထက်က ရှိခဲ့ဖူးသည့် နွေးထွေးသော ဆက်ဆံရေးမျိုး လိုလားနေကြပါသည်။ သန်းကြွယ် သူဋ္ဌေး ဖြစ်သူ ၀န်ကြီးချုပ်ဟောင်းက မြန်မာနိုင်ငံတွင် လူ့အခွင့်အရေး မြှင့်တင်ပေးရေး၊ ဒီမိုကရေစီ ပြုပြင် ပြောင်းလဲရေးများ ဖြစ်ပေါ်လာ စေရေးထက် စာလျှင် စီးပွားရေး အခွင့်အလမ်းများ ရှာဖွေရေးကိုသာ အလေးထားခဲ့သူ ဖြစ်သည်။
သို့သော်လည်း လက်ရှိ အရှေ့တောင်အာရှ နိုင်ငံများအဖွဲ့(အာဆီယံ) ၏ အခြားအဖွဲ့ဝင် နိုင်ငံများက ထိုင်းနိုင်ငံ၏ ယခု မြန်မာနိုင်ငံ ဆိုင်ရာ မူဝါဒ ရပ်တည်ချက်အသစ်ကို သဘောကျ ရပ်တည် ပေးကြပါသည်။ ပြီးခဲ့သည့်လက ဖနွမ်းပင်မြို့တွင် နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီးများ အစည်းအဝေး ကျင်းပရာ၌ စင်္ကာပူနိုင်ငံ အပါအ၀င် အဖွဲ့၏ အခြားနိုင်ငံများက ဒေါ်အောင်ဆန်း စု ကြည်ကိစ္စ နှင့် ပတ်သက်၍ ထိုင်းနိုင်ငံ၏ ရပ်တည်ချက်ကို သဘောတူ ရပ်တည်ကြောင်း ဖော်ပြခဲ့ကြပါသည်။
စင်္ကာပူနိုင်ငံက မြန်မာနိုင်ငံတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အများဆုံးပြုထားသည့် နိုင်ငံတနိုင်ငံ ဖြစ်ပြီး မြန်မာ စစ်အစိုးရနှင့် နီးစပ်သော ဆက်ဆံရေး ရှိနေသည့် နိုင်ငံလည်း ဖြစ်သည်။ မြန်မာစစ်ဗိုလ်ချုပ်များ ကလည်း ချမ်းသာကြွယ်ဝသည့် ကျွန်းနိုင်ငံတွင် ဆေး ကုသမှု ခံယူလေ့ ရှိကြသည်။
လက်ရှိ အာဆီယံအဖွဲ့၏ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ် မစ္စတာ ဆူရင် ပစ်ဆူဝန် (Surin Pitsuwan) က ထိုင်းနိုင်ငံမှ ဒီမို ကရက်တစ် ပါတီဝင် တဦးဖြစ်နေသည့် အလျောက် သူက မြန်မာနိုင်ငံသွားလျှင် ယခုအခြေအနေတွင် အောင်မြင်ဖွယ် မမြင်သည့် အတွက်ကြောင့်လည်း စင်္ကာပူနိုင်ငံမှ ၀ါရင့်ဝန်ကြီး ဂိုချုပ်တောင်ကို မြန်မာနိုင်ငံသို့ သွားရောက်စေပြီး ဗိုလ်ချုပ်မှူး ကြီး သန်းရွှေနှင့် တွေ့ဆုံစေခြင်း ဖြစ်ပေလိမ့်မည်။ မြန်မာပြည်၏ နိုင်ငံရေး အခြေအနေနှင့် ပတ်သက်၍ အာဆီယံအဖွဲ့၏ အမြင်ကိုလည်း နားချ ဆွေးနွေးနိုင်ကြမည်ဟု မျှော်လင့် ခဲ့ကြပုံရပါသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ လွှတ်ပေးရေး ပြဿနာသာမက၊ ယခု ဖြစ်ပေါ်နေသည့် ကရင် ဒုက္ခ သည်များ ပြဿနာ၊ နာမည်ပျက်ခဲ့ ရသည့် ရိုဟင်ဂျာ ဒုက္ခသည်များပြဿနာ စသည့်ဆင့်ကဲ ပြဿနာများကြောင့် ထိုင်း၊ အင်ဒိုနီးရှား နိုင်ငံများသို့ ရိုက်ခတ် သက်ရောက်နေရပြီ ဖြစ်သည်။ ဤဆင့်ကဲ ပြဿနာများကြောင့်လည်း အာဆီယံအဖွဲ့က တင်းမာလာခဲ့ပုံလည်း ရပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဆိုးရွားစွာ လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုများ ဆက်လက် ဖြစ်ပေါ်နေခြင်းကြောင့်လည်း၊ ဒေသဆိုင်ရာ အဖွဲ့ အစည်း၏ ကျရှုံးမှုကို ဖော်ပြသကဲ့သို့ ဖြစ်နေစေပါသည်။ မြန်မာ စစ်ဗိုလ်ချုပ်များကို မည်သို့မည်ပုံ ကိုင်တွယ်မည်ကို စနစ် တကျ မူဝါဒချမှတ် ချဉ်းကပ်နိုင်ခြင်း မရှိသရွေ့ မြန်မာနိုင်ငံသည် “ဗြဟ္မာ့ ဦးခေါင်း” ဖြစ်နေဦးမည်သာ ဖြစ်သည်။ အာဆီယံ အဖွဲ့၏ ညီညွတ်ရေးကို ထိခိုက် စေရုံမျှ မက အသစ်ချမှတ်ခဲ့သည့် အာဆီယံဒေသ ပဋိညာဉ် စာတန်းပါ ဒေသ၏ တန်ဖိုးထား ချက်များကိုလည်း သရော် ခြိမ်းခြောက်နေသည့် အလား ဖြစ်နေပါတော့သည်။
နေ့စဉ်သတင်းများ (၁၇- ၆- ၀၉)
■ ဒီမိုကရေစီနဲ့ အမျိုးသားရင်ကြားစေ့ရေး ဖော်ဆောင်ဖို့ စစ်အစိုးရကို တရုတ်ဝန်ကြီးချုပ် တိုက်တွန်း သတင်း
■ မြန်မာပြည် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး တရုတ်ပြောဆို သတင်း
■ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ကိုလှမျိုးနောင် မျက်စိနှစ်ဖက်စလုံး ကွယ်နိုင်ဖွယ်ရှိ သတင်း
■ BGF ပြောင်းလဲရန် လက်မခံသောအဖွဲ့များကို နအဖမှ နည်းပြောင်းစည်းရုံးမည်ဟု ပစ်ခတ်အဖွဲ့များဆို သတင်း
■ ၂၀၂ စခန်းကို နအဖနှင့် ဒီကေဘီအေ ပူးပေါင်းတပ် စတင်တိုက်ခိုက် သတင်း
■ နအဖ၊ ဒီကေဘီအေ ပူးပေါင်းတပ်များနှင့် ကေအန်ယူတိုက်ပွဲ ယနေ့ငြိမ်သက် သတင်း
■ ကချင်အဖွဲ့ စစ်အင်အား တိုးချဲ့ သတင်း
■ လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခဒေသမှ ကလေးများအားကူညီရေး ကုလသမဂ္ဂအစီရင်ခံစာ သတင်း
■ သံလွင် အရှေ့ခြမ်း စစ်အင်အား ဖြည့်တင်းမည်ဟု တြိဂံ တိုင်းမှူးပြော သတင်း
■ အီရန်အာဏာရှင်ရွေးကောက်ပွဲမှ မြန်မာတွေ ဘာအတုယူသင့်သလဲ သတင်း
■ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အမှု နောက်ထပ် သက်သေလက်ခံဖို့ လျှောက်ထားချက် ကြားနာမည် သတင်း
■ သက်သေထွက်ဆိုခွင့် အယူခံလွှာကို ဗဟိုတရားရုံးက လက်ခံ သတင်း
■ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား ဥပဒေခံစားခွင့်ပေးဖို့ ကုလကိုယ်စားလှယ်များ တောင်းဆို သတင်း
■ သက်သေ (၂) ဦးကိစ္စ တရားရုံးချုပ် ကြားနာဖို့ လက်ခံ သတင်း
■ ဦးဝင်းတင်၊ ဦးတင်ဦး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အတွက် သက်သေလိုက်ရန် မျှော်လင့်ချက်မကုန်သေး သတင်း
■ ဗဟိုတရားရုံးမှ တရားခံပြသက်သေများကို လက်ခံရန် ပြင်ဆင်မှုကို လက်ခံ သတင်း
■ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဓာတ်ပုံ ဖြန့်သူများ ဗုံးဖောက်ခွဲမှုဖြင့် တရားစွဲခံရနိုင် သတင်း
■ သက်သေ (၂) ဦး အတွက် လျှောက်လဲချက် ဗဟိုတရားရုံး ကြားနာမည် သတင်း
■ ဥပဒေပညာရှင်များက လွတ်လပ်သည့် တရားစီရင်ရေး တောင်းဆို သတင်း
■ ဂျပန်လွှတ်တော်အမတ်များသမဂ္ဂ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ဆုချီးမြှင့်မည် သတင်း
■ ပြည်တော်ပြန်အဖြစ်နဲ့ ကြုံရတဲ့ မလေးရှားရောက် မြန်မာအလုပ်သမားတွေ သတင်း
■ ၂၀၁၀ လွန် စစ်ခေါင်းဆောင်များ အခန်းကဏ္ဍ သတင်း
ဤမေးခွန်းကို နအဖစစ်အစိုးရဟာ ယနေ့အချိန်တွင် အကြီးအကျယ် စဉ်းစားရတော့မယ်။ ဖြေဆို ရတော့မယ်။
ဒီမေးခွန်းအတွက် နအဖစစ်အစိုးရ ငယ်ထိပ်မြွေပေါက် ခေါင်းမီးတောက်.. ဖင်ကြား ခဲညှပ်နေပြီ။
တရွာနဲ့ တယောက်၊ တကမ္ဘာလုံးနဲ့ တနိုင်ငံ အထီးကျန် ငပွကြီး ဖြစ်နေပြီ။ ဟီရိသြတ္တပ္ပ အရှက် အကြောက် တရား ရှိတတ်ရင် ကိုယ့်လည်ပင်း ကြိုးကွင်းစွပ် မြစ်ထဲခုန်ဆင်း သတ်သေသင့်ပြီ။
ဗုဒ္ဓဘာသာ အရေခြုံပြီး မြန်မာပြည်တနံတလျား ဘုရားတည်၊ ကျောင်းဆောက် ထီးတော်တင် လုပ်ခဲ့ကြတာ သူတုိ့ပဲ။
သံဃာတော် ဆရာတော်ကြီးတွေကို ဘွဲ့တံဆိပ်တော်တွေ လှူဒါန်းဆက်ကပ် တာလည်း သူတို့ပဲ။
မြန်မာပြည်သူလူထုကို ဘာသာရေး မှိုင်းတိုက်ပြီး၊ သူတို့ကိုယ် သူတို့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် စစ်စစ်ကြီးတွေ အဖြစ်၊ သူတို့ရဲ့ သတင်းစာတွေ ထဲမှာ ဓာတ်ပုံကြီးတွေနဲ့ ဟန်ဆောင် သရုပ်ပြ ပြုလုပ် ကြတာလည်း သူတို့ပါပဲ။
နောက်ဆုံးတော့ ဒီဟန်ပြသရုပ်ဆောင်မှုတွေဟာ ၂၀၀၇ ခုနှစ် စက်တင်ဘာ ရွှေဝါရောင် တော်လှန်ရေးမှာ ဘွင်းဘွင်းကြီး ဗူးပေါ်သလို.. မှောက်ထားသော ခွက်ကို လှန်တိုက်သကဲ့သို့ ထင်ထင်ရှားရှား ပေါ်ခဲ့တာပဲ မဟုတ်လား။
အေးချမ်းစွာ မေတ္တာပို့ ဆုတောင်းလမ်းလျှောက်ကြတဲ့ သံဃာတော်များနဲ့ ကျောင်းသား ပြည်သူတွေကို အကြမ်းဖက် တိုက်ခိုက်၊ ရိုက်နှက်၊ သတ်ဖြတ်၊ ဖမ်းဆီး ထောင်ချ၊ သွေးမြေကျခဲ့ကြရတာဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေမှ ဟုတ်ကြရဲ့လား။
တနိုင်ငံလုံး တကမ္ဘာလုံးက ဒီလို ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့ ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေး ဇာတ်လမ်းကြီးကို ဒီဗွီဘီကရော၊ ဗီဒီယို မှတ်တမ်း ခွေတွေကပါ ကြည့်ခဲ့ရလို့၊ နအဖ စစ်အစိုးရရဲ့ ရက်စက်ယုတ်မာမှုကို သိနေကြပြီ။ ဒါတွေက ဘယ်တော့မှ မပျောက်။ နအဖရဲ့ အမဲစက် သမိုင်းမှတ်တမ်း အဖြစ် တင်ကျန်နေဦးမှာ။
ဒီလို ပုဂ္ဂိုလ်ထူးကိုမှ မကောင်းမြင်၊ အာဃာတ၊ အငြိုးထား အမုန်းတရားတွေနဲ့ ပြစ်ဒဏ်ချချင် လိုကြတဲ့ နအဖ စစ်အစိုးရ အခုတော့ ကိုယ်မွှေးတဲ့ မီးနဲ့ ကိုယ်ပြန်လောင် နေရပြီ။
၎င်းပြင် ကုလသမဂ္ဂ အတွင်းရေးမှူးချုပ် မစ္စတာ ဘန်ကီမွန်းနှင့် လက်ထောက် မစ္စတာ ဂန်ဘာရီ၊ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုမှ သမ္မတ အိုဘားမား၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး မစ္စစ် ဟီလာရီကလင်တန်၊ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး ရောဘတ်ဂိတ်၊ ဗြိတိန်၊ ဂျပန်၊ တောင်ကိုရီးယား၊ ထိုင်း၊ ကမ္ဘောဒီးယား၊ ဗီယက်နမ်၊ စင်ကာပူ၊ မလေးရှား၊ ဖိလစ်ပိုင်၊ အင်ဒိုနီးရှား၊ အရှေ့တီမော၊ တောင်အာဖရိက စသည့်တို့မှ နိုင်ငံ ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ ဖိအားပေး တောင်းဆိုမှုတွေက နအဖရဲ့ အူထဲ အသည်းထဲမှာ ၀င်ရောက်ခြောက်လှန့် မွှေနှောက်နေပြီ။ စစ်ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေ ခေါင်းခဲပြီး စားမ၀င် အိပ်မပျော်၊ နှလုံးခုန် သွေးတိုး နေလောက်ပြီ။ သတင်းစာထဲက ဟန်ပြ အပြုံးရိပ်တွေ မချိပြုံးတွေ တွေ့နေရပြီ။
ဘယ်လမ်းရွေးမလဲ။ လတ်တလော ပူပူနွေးနွေး ဇွန်လ (၃) ရက်မှ (၅) ရက်နေ့အထိ မြန်မာနိုင်ငံကို ရောက်ရှိလာတဲ့ ဂျပန်နိုင်ငံ ဒုတိယ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး (အထူးသံကိုယ်စားလှယ်) နဲ့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးစဉ် တိုက်တွန်း ပြောကြားချက်တွေ နှင့် ဇွန်လ (၉) ရက်နေ့က ချစ်ကြည်ရေးခရီး ရောက်ရှိလာတဲ့ စင်ကာပူ သမ္မတနိုင်ငံ ၀ါရင့်ဝန်ကြီးချုပ် ဂိုချောက်တောင် နှင့် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေ၊ ၀န်ကြီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး သိန်းစိန်တို့နှင့် သီးခြားတဦးစီ တွေ့ဆုံပြီး မြန်မာ နိုင်ငံအရေးနှင့် အန်အယ်လ်ဒီ ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည် ကိစ္စ ဆွေးနွေးအကြံပြု ပြောဆိုချက်တွေကို နအဖစစ်အစိုးရ အလေးထား ဂရုစိုက်ရတော့မည်။
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ပြောကြားခဲ့တဲ့ မိန့်ခွန်းထဲကလို “ဟိုလူလာ မျက်နှာချိုသွေးရ၊ ဒီလူလာ မျက်နှာချို သွေးရနဲ့ ကြာရင် …(..) နိုင်ငံကြီး ဖြစ်သွားမယ်” ဆိုတဲ့ ကိန်းဆိုက်နေပြီ။ ခွေးတကောင်ကို ချောင်ပိတ်ရိုက်တဲ့ အဖြစ်မျိုးလည်း မဖြစ်ချင်ပါ။ ထွက်ပေါက် ပေးချင်ပါတယ်။ ဒီထွက်ပေါက်က ဘာလဲ။
- အန်အယ်လ်ဒီ ခေါင်းဆောင်များ၊ တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်များ (ရွေးကောက်ပွဲမှ အနိုင်ရ တိုင်းရင်းသား ခေါင်းဆောင်များ အပါအ၀င်) နှင့် နအဖ တပ်မတော် ခေါင်းဆောင်များ သုံးပွင့်ဆိုင်၍ အမျိုးသား ရင်ကြားစေ့ရေး၊ ပြန်လည် သင့်မြတ်ရေး အမြန်ဆုံး ဆွေးနွေးရန်။
- ဒီမိုကရေစီ မကျတဲ့ အခြေခံဥပဒေပါ အချက်များ ပြန်လည် သုံးသပ် ပြင်ဆင်ရန်နှင့်
- နောက် ကျင်းပမည့် ရွေးကောက်ပွဲအတွက် နိုင်ငံတကာမှ လေ့လာကြီးကြပ် ကွပ်ကဲမှုများ ခွင့်ပြု ပေးရန်တို့ ဖြစ်ပေသည်။
နအဖ စစ်အစိုးရအနေနှင့် ယနေ့အချိန်တွင် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် နိုင်ငံတကာ အစိုးရများနှင့်ပါ လက်တွဲ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်သွားရန် လမ်းတလမ်းသာ ရှိပါတော့သည်။ ကျွဲပါးစောင်းတီး ဖြစ်နေရမည့် အချိန် မဟုတ်တော့ပါ။
နေ့စဉ်သတင်းများ (၁၆- ၆- ၀၉)
■ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဥပမာထား ၀ ခေါင်းဆောင်များ အသွင်ပြောင်းရေး ငြင်းဆန် သတင်း
■ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အမှု တရားမျှတဖို့ ကုလ လူ့အခွင့်အရေးကိုယ်စားလှယ် တောင်းဆို သတင်း
■ ကုလကိုယ်စားလှယ် (၅) ဦး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အမှု မျှတလွတ်လပ်ရေး တောင်းဆို သတင်း
■ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မွေးနေ့ဆုတောင်းပွဲ သံဃာနှင့် ကျောင်းသားအဖွဲ့များ တိုက်တွန်း သတင်း
■ မြန်မာနှင့် အာဆီယံအရေး (ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်နှင့် အမေးအဖြေ)
■ အီရန်သမ္မတရွေးကောက်ပွဲ မဲတချို့ ပြန်ရေတွက်ဖို့ စီစဉ် သတင်း
■ လူကုန်ကူးမူတိုက်ဖျက်ရေး မြန်မာနိုင်ငံ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ ပျက်ကွက်ဆဲ သတင်း
■ အကျဉ်းသားလွတ်မြောက်ရေး လက်မှတ် (၆) သိန်းကျော် ကုလအတွင်းရေးမှူးချုပ်ထံပို့ သတင်း
■ တရုတ်ပြည်သို့ ဓာတ်ငွေ့ပိုက်လိုက် စက်တင်ဘာလမှာ စတင်တည်ဆောက်မည် သတင်း
■ မုံရွာ ကြေးနီတောင် သတ္ထုတွင်းလုပ်ငန်း အိုင်ဗင်ဟို ပြန်လည်စတင် သတင်း
■ မြန်မာ (၈၈) ဦး မဲဆောက်တွင် အလုပ်ထုတ်ခံရ သတင်း
■ မြန်မာအလုပ်သမားများ ပြည်ပတွင် ဥပဒေအရ ကာကွယ်ခံရမှု နည်းပါး သတင်း
■ ANC အတွင်းရေးမှူးနှင့် NUPA ဒု-ဥက္ကဋ္ဌ ပါတီတာဝန်များမှ ရပ်ဆိုင်းခံရ သတင်း
■ ထိုင်းနိုင်ငံမှ ကူးခွေရောင်းသူများကို အရေးယူရန် မွန်အဆိုတော် စီစဉ် သတင်း
■ အပျက်အစီးပုံကြားထဲက ဓနုတ်စေတီ - ယခင်နှင့် ယခုမြင်ကွင်း (ဓာတ်ပုံသတင်း)
မြန်မာလူမျိုးများအနေဖြင့် အရူးကိုမီးဝိုင်းနေပါပြီ ဆိုသောစကားကို အများတကာ သဘောပေါက် နေကြပြီး ဖြစ်ပါသည်။ မီးများပတ်ပတ်လည် ဝိုင်းရံခံနေရသော အရူးသည် ပြေးပေါက်လည်း မရှိ။ ထွက်ပေါက်လည်း မရှိတော့ပါ။ ကယ်သူမရှိ။ ကူသူ မရှိလျှင်တော့ သေပွဲဝင်ရန်သာ ရှိပါတော့သည်။ အရူး ဆိုသည်ကိုလည်း အကျယ်တဝင့် ရှင်းပြရန်ပင် မလိုပါ။ ၁၉၆၂ခုနှစ်ကပင် အမိမြန်မာ နိုင်ငံတော်တွင် ပြည်သူ အပေါင်း၏ ချွေးနည်းစာ အခွန်အတုတ်များဖြင့် တိုင်းပြည်နှင့် လူမျိုးကို ကာကွယ်ရန် အတွက် တည်ထောင်ဖွဲ့စည်း ထားသော စစ်တပ်ကြီးမှ အာဏာရူးကြီးများ ပေါ်ပေါက် လာခဲ့သည်ကို အားလုံး အသိပင်ဖြစ်ပါသည်။
အာဏာရူးကြီးများတွင် ဗိုလ်နေဝင်းက ပထမဖြစ်ပြီး ဗိုလ်နေဝင်းနှင့် အတူ ရူးဖော်ရူးဘက် ဗိုလ်စန်းယု ဗိုလ်စိန်လွင် ဗိုလ်စောမောင် ဗိုလ်ခင်ညွန့်နှင့် ယခုလက်ရှိ ဗိုလ်သန်းရွှေတို့ပင် ဖြစ်ပါသည်။ အာဏာရူး စစ်ဗိုလ်များထဲတွင် သွက်ချာပါဒ အရူးဆုံးကတော့ ယခုလက်ရှိ ဗိုလ်သန်းရွှေပင် ဖြစ်ပါသည်။ တရားတော်အရ ဆိုရပါလျှင် လောဘ ဒေါသ မောဟနှင့် မာန်မာနများသည် လူ့စိတ် လူ့ခန္ဓွာကို လောင်မြိုက် စေတတ်သော အကုသိုလ် မီးပွါးများပင် ဖြစ်ပါသည်။
16၊ 6၊ 09
ပြည်တွင်း ခရီးတခုကို အစိုးရပိုင် မြန်မာ့လေကြောင်းနဲ့ သွားဖို့ရာမှာ လက်မှတ်ဝယ်ယူ ရရှိဖို့အတွက် ဒေသ အာဏာပိုင်တွေနဲ့ ရင်းနှီးမှ မဲနှိုက်လို့ ပေါက်မှ၊ အဲလိုမှ မဟုတ်ခဲ့ရင်တော့ မှောင်ခိုဈေးပေးပြီး ၀ယ်မှပဲ လေယာဉ်လက်မှတ် ရတာပါ။ အဲဒီလို လက်မှတ်တစောင်ကို ရဖို့ခက်ခက်ခဲခဲ ကြိုးစားရပြီးနောက်မှာ မိမိရဲ့ အသက်ကို သက်တမ်းရှည်ကြာလှပြီ ဖြစ်တဲ့ လေယာဉ်အိုများနဲ့ စံချိန်စံညွှန်း မမှီတဲ့ လေယာဉ်ကွင်းများရဲ့ လက်ထဲ အပ်ထားရပါတယ်။
ပြည်တွင်း ပြေးဆွဲနေတဲ့ တနာရီသာသာ ခရီးစဉ်တွေမှာ မတော်တဆ ဖြစ်မှုတွေကို မကြာခဏ ကြားသိရပါတယ်။ တော်ရုံတန်ရုံ အန္တရာယ်လိုမျိုးကို တွေး မကြောက်တတ်တဲ့ မြန်မာလူမျိုးတွေတောင်မှ မြန်မာ့လေကြောင်း စီးရမယ်ဆို စိုးရိမ်မှုပေါ်လာလေ့ ရှိတယ်လို့ ကြားသိ နေရပါတယ်။
နအဖ ခေါင်းဆောင်လုပ်သူတွေကတော့ ဟောင်းအို စိတ်မချရတဲ့ လေယာဉ်တွေကို ဘယ်တော့မှ စီးနင်းလေ့ မရှိပဲ၊ ပြည်တွင်း ပြည်ပ ခရီးစဉ်တွေမှာ ပိုမိုသစ်လွင် စိတ်ချရတဲ့ အဲပုဂံရဲ့ လေယာဉ်ကို ငှားစီးလေ့ရှိတယ်လို့ ကြားသိရပါတယ်။
မြန်မာစစ်အစိုးရအတွက် မကြာမီ သီတင်းပတ်တွေ အတွင်း ဘုရားကပြို၊ လေယာဉ်က လမ်းချော်နဲ့ ကောင်းမွန်တဲ့ သတင်း၊ အတိတ်နိမိတ် တခုမှ မတွေ့ရပါဘူး။ အစိုးရရဲ့ သတင်းစာတွေမှာ နေ့စဉ် စာမျက်နှာ ၁မျက်နှာ သီးသန့်ပေးပြီး နိုင်ငံတကာက လေယာဉ်ပျက်၊ ရေကြီး၊ ကားမှောက်၊ ဗုံးကွဲ ဆိုတာမျိုးတွေ ဓါတ်ပုံနှင့်တကွ ပြသလေ့ရှိတာ ကမ္ဘာကြီးဟာ နေ့စဉ် ဒုက္ခဆင်းရဲနဲ့ ကြုံတွေ့နေရပြီး မြန်မာပြည်ကတော့ အေးဆေး တည်ငြိမ်နေတယ်ဆိုတဲ့ သဘောမျိုးကို ဆိုလိုချင်ပုံ ရပါတယ်။
ဒါပေမယ့် လူဦးရေ သန်း ၆၊ ၇ထောင် ကျော်ရှိတဲ့ ကမ္ဘာပေါ်မှာ သန်း၅၀မျှသာရှိတဲ့ မြန်မာပြည်က မတော်တဆ ဖြစ်တာတွေ သီတင်းပတ် မခြား ဖြစ်ပျက်နေတာ ဘာကြောင့်လဲ။ တိုင်းပြည် အုပ်ချုပ်သူတွေက မဟုတ်တာတွေ လုပ်နေလို့လား။ အဲဒီလို မဟုတ်ရင်တော့ ဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေးအတွက် အသီးသီး တာဝန်ရှိသူတွေက အလုပ် မလုပ်ကြလို့ပဲ ဆိုတဲ့ကောက်ချက်သာ ချရတော့မှာပါ။
Posted by ၀ိမုတ္တိ at 11:42 AM ,0comments
နေ့စဉ်သတင်းများ (၁၅- ၆- ၀၉)
■ အတိုက်အခံသမ္မလောင်း မူဆာဘီကိုယ်တိုင် ဆန္ဒပြပွဲမှာ ပါဝင် သတင်း
■ အီရန်အတိုက်အခံတွေ တားမြစ်မိန့်ကြားက ဆန္ဒပြ သတင်း
■ ဒေ၀ူးကုမ္ပဏီအပေါ် ကန့်ကွက်မှုအား ကိုရီးယားအစိုးရ ပယ်ချ သတင်း
■ ဘူးသီးတောင် ထောင်မှ ထောင်ပိုင်၊ ထောင်မှူးများ အလုပ်ဖြုတ်ခံရ သတင်း
■ ခွဲထွက်အဖွဲ့ ပြန်ပူးပေါင်းရန် SSA (တောင်ပိုင်း) က ပြော သတင်း
■ လက်ညှိုးထောင် ခေါင်းညိတ်များထက် ခေါင်းခါအပစ်ရပ်အဖွဲ့ ပိုများနိုင် သတင်း
■ အီးယူကြေညာချက် အခြေအမြစ်မရှိဟု စစ်အစိုးရက ပြောဆို သတင်း
■ သံဃာတော်များ ပြည်ပထွက်ခွင့် ခက်ခဲ သတင်း
■ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လွတ်မြောက်ရေး ကြိုးပမ်းမှုတွေ အရှိန်မြင့်လာ သတင်း
■ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ပြန်လွှတ်ရန် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်း (၁၀၀) ကျော် တောင်းဆို သတင်း
■ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရုံးတင်တရားစွဲဆိုအမှု ရုံးချိန်း ထပ်မံရွှေ့ဆိုင်း (ဗွီဒီယိုသတင်း)
■ မြောက်ကိုရီးယားနှင့် မြန်မာ လျှို့ဝှက်ဆက်ဆံရေး ဖော်ထုတ်ရေးသားး သတင်း
■ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မောင်အေး တရုတ်နိုင်ငံ (၆) ရက်ကြာခရီး စတင် သတင်း
■ သီရိလင်္ကာသမ္မတနှင့်အဖွဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိ သတင်း
■ မြွေအစစ်နဲ့ သရုပ်ဆောင်တယ်ဆိုတဲ့ လူမင်း၊ ဂျောက်ဂျက် ယဉ်ကျေးတော့မည်ဟုဆို (ဓာတ်ပုံသတင်း)
မြောက်ကိုရီးယား နိုင်ငံအပေါ် ကုလသမဂ္ဂ လုံခြုံရေးကောင်စီက အရေးယူမှု အသစ်တွေ ပြုလုပ်တာကို တုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့ သူကလည်း နျူကလီးယား လက်နက် ထုတ်လုပ်မှုကို အရှိန်မြှင့် လုပ်ဆောင်မယ်လို့ မြောက်ကိုရီးယား က ခြိမ်းခြောက်သွား ပါတယ်။
မြောက်ကိုရီးယားရဲ့ သင်္ဘောတွေကို တားဆီးဖို့ ဘယ်လိုပဲ ကြိုးစားလာရင်ဖြစ်ဖြစ် မြောက်ကိုရီးယား အစိုးရက စစ်ရေးအရ တုံ့ပြန်မယ်လို့ မြောက်ကိုရီးယား နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနက ကြေညာချက် ထုတ်ပြန်ပြီး အစိုးရ သတင်းဌာနက ကြေညာသွားပါတယ်။
ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေက ကလေးတွေကိုတောင် ကြောက်သတဲ့လား။
16၊ 06၊ 09
ဧပြီလ ၁၈ရက်နေ့က မော်လမြိုင်မြို့မှာ မူလတန်းနဲ့ အလယ်တန်း စာမေးပွဲ အောင်စာရင်းတွေ ထွက်ပါတယ်။ အောင်ချက်ကတော့ ကျောက်သင်ပုန်းကြီးမှာ ရေးထာတဲ့ အတိုင်းပါပဲဗျား “သူငယ်တန်းမှ သတ္တမတန်းအထိ ဖြေဆိုသူတိုင်း အားလုံးအောင်သည်” တဲ့။
စနေနေ့၊ ဇွန်လ 13 2009
ရက်စက်၍ လျှို့ဝှက်သိပ်သည်းသော မြန်မာစစ်အစိုးရ အတွက် မြောက် ကိုရီးယားက လှိုဏ်ခေါင်းများ တူးဖော် ပေးနေခြင်း
ဘန်ကောက် (ယေးလ်ဂလိုဘယ် ) ။ ။ ဒုံးကျည်နှင့် နျူးကလီးယား နည်းပညာ၊ ငွေတု ပြုလုပ်ခြင်းနှင့် စီးကရက် မှောင်ခိုလုပ်ငန်း၊ နိုင်ငံရပ်ခြား တိုင်းပြည်များတွင် ဟန်ပြ ကုမ္ပဏီများ ပျော်ပွဲစား ရုံများ ဖွင့်လှစ် လုပ်ကိုင်ခြင်း၊ အရှေ့အလယ်ပိုင်း ဒေသသို့ အလုပ်သမားများ တင်ပို့ခြင်း၊ ဤလုပ်ငန်းတို့မှာ ပြုံယမ်းရှိ စစ်အစိုးရ အတွက် အရေးတကြီး လိုအပ်နေသော နိုင်ငံခြား ငွေကြေးများ ရှာဖွေရာတွင် မြောက်ကိုရီးယားတို့ အလွန် ကျွမ်းကျင်၍ တီထွင် ဖန်တီးမှုရှိစွာ လုပ်ကိုင်နိုင်သော အလုပ်များ ဖြစ်သည်။ သို့သော် ဤလှိုဏ်ခေါင်းဖောက် လုပ်ငန်း ကျွမ်းကျင်မှုကို နိုင်ငံခြားအလုပ် အပ်နှံသူများ အတွက် လုပ်ကိုင်ပေးသည် ဆိုသည်မှာ လူသိနည်းသော စီးပွါးရေး လုပ်ငန်းတခု ဖြစ်သည်။ စိတ်ဝင်စားဖွယ် ဤစီးပွါးရေး လုပ်ငန်းအကြောင်း တစေ့တစောင်း သိရှိနိုင်သည့် မြန်မာနိုင်ငံမှ လျှို့ဝှက်ရိုက်ကူး ပေးပို့လိုက်သော ဓါတ်ပုံများကို ဤသတင်းထောက်က ရရှိထားပါသည်။
၂၀၀၃ ခုနှစ်မှ ၂၀၀၆ ခှုနှစ်အတွင်း ရိုက်ကူးထားသည့် ဤဓါတ်ပုံများတွင် တကမ္ဘာလုံးက မြန်မာနိုင်ငံတွင် ကျင်းပမည့် ရွေးကောက်ပွဲကို အမျှော်ကြီး မျှော်နေချိန်တွင် စစ်အစိုးရက လှိုဏ်ခေါင်းများ တမျှော်တခေါ် တူးဖော်ခြင်းဖြင့် အလုပ် ရှုပ်နေသည်ကို တွေ့ရနိုင်သည်။ ပြင်ပကမ္ဘာက ဖြစ်စေ၊ သူ့ပြည်သူများက ဖြစ်စေ ပေးလာမည့် မည်သည့် ခြိမ်းခြောက်မှု မျိုးကို မဆို ကြံ့ကြံ့ခံနိုင်မည့် ဤမြေ အောက် အဆောက် အအုံများကို မြောက်ကိုရီးယား ပညာရှင်များက ကူညီ ဆောက်လုပ် ပေးနေသည်။ ဤလှိုဏ်ခေါင်းများသည် မြောက်ကိုရီးယား နိုင်ငံက တက်တက်ကြွကြွ လုပ်ကိုင်ပေးနေ သည်ဟု ဆိုသည့် နျူးကလီးယား နည်းပညာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းနှင့် ပတ်သက်မှု ရှိသည် မရှိသည်ကိုမူ မသိရပါ။ (မြန်မာ့ နျူးကလီးယား မက်မောမှုတွင် ရှု)
ယခု ထုတ်ဝေဖြန့်ချိလိုက်သော ဓါတ်ပုံများတွင် မြန်မာနိုင်ငံ၏ အသစ် တည်ဆောက်ထားသော ခံတပ် မြို့တော်ကြီး နေပြည်တော်၌ မြေအောက် အဆောက် အအုံများ အနှံ့အပြား ကွန်ရက်သဖွယ် တည်ဆောက် ထားသည်ကို တွေ့ရနိုင်သည်။ စစ်အစိုးရသည် သူ၏ အုပ်ချုပ်မှု ယန္တယားကို ၂၀၀၅ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ၌ မြို့တော်ဟောင်း ရန်ကုန်မြို့မှ ကီလိုမီတာ ၄၆၀ (မိုင် ၃၀၀) အကွာတွင် လုံးလုံး အသစ် တည်ဆောက်ထားသော နေရာသစ်သို့ ရွှေ့ပြောင်းသွားခဲ့သည်။
ဘုရင်မင်းမြတ်တို့၏ ဘုံဗိမာန် ဟု အဓိပ္ပါယ်ရသော နေပြည်တော်သည် စစ်အစိုးရ အတွက် အာဏာ၏ သင်္ကေတ ဖြစ်ပြီး ကိုလိုနီခေတ် မတိုင်ခင် ရှေးလက်နက် နိုင်ငံတော် ထူထောင်ခဲ့သာ ဘုရင်များ အစဉ်အလာ အတိုင်း နိုင်ငံသစ်ကို ထူထောင်လိုသည့် ဆန္ဒနှင့် အညီလည်း ဖြစ်သည်။ သို့သော် မြေအောက်တွင် တည်ဆောက်ထားသော အဆောက်ဦများမှာမူ စစ်တပ်က အာဏာကို စွဲစွဲမြဲမြဲချုပ်ကိုင် ထားလိုသည့် သဘောသာ ဖြစ်သည်ဟု ယူဆရသည်။ နောက်ထပ် လှိုဏ်ခေါင်းများနှင့် မြေအောက် အစည်းအဝေး ခန်းမများကို တောင်ကြီးမြို့ အနီးတွင် တည်ဆောက်ထားပြီး ဖြစ်သည်။ တောင်ကြီးသည် မြန်မာနိုင်ငံ အရှေ့မြောက် ရှမ်းပြည်နယ်၏ မြို့တော်ဖြစ်ပြီး ဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာ တည်ရှိနေခဲ့သော သောင်းကျန်းမှု များစွာ၏ နေရပ်ရင်းလည်း ဖြစ်သည်။ ၂၀၀၆ ခုနှစ် ဇွန်လအတွင်းက ရိုက်ကူးထားသော ဓါတ်ပုံအချို့တွင် မြောက်ကိုရီးယား ပညာရှင်များ နေပြည်တော် ဒေသအတွင်း အစိုးရ ဧည့်ဂေဟာတခုမှ အရပ်ဝတ်များဖြင့် ထွက်လာပုံကို တွေ့ရသည်။ သူတို့အနီးရှိ မြန်မာ အလုပ်သမားများနှင့် ပုံသဏ္ဍန် ကွဲပြားနေသော အဆိုပါ ပညာရှင်များမှာ မြောက်ကိုရီးယား လူမျိုးများ ဖြစ်သည်ဟု အာရှ သံတမန်များက ခွဲခြားပြပါသည်။
ယင်းသည် မြောက်ကိုရီးယား သူလျှိုများက ရန်ကုန်မြို့အာဇာနည် ဗိမာန်တွင် ၁၉၈၃ ခုနှစ်က ဗုံးထောင် တိုက်ခိုက်၍ ထိုစဉ်က ဒုတိယ ဝန်ကြီးချုပ်နှင့် အခြားဝန်ကြီး ၃ ဦး အပါအဝင် တောင်ကိုရီးယား အရာရှိများ သေဆုံးသွားခဲ့၍ သံတမန် အဆက်ဖြတ်အပြီး ယခုတဖန် တပတ်ပြန်ကျော့၍ ဆက်ဆံရေး သစ်များ ထူထောင်လာခြင်း ဖြစ်သည်၊
မြန်မာနှင့်မြောက်ကိုရီးယား သံတမန်များ အကြား လျှို့ဝှက် ဆွေးနွေးပွဲများသည် ၁၉၉ဝ စုနှစ်များ ကတဲက ဘန်ကောက်မြို့တွင် စတင်ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ယခင် ဆယ်စုနှစ်အတွင်း ရန်လိုသော အပြုအမူများ ရှိခဲ့လင့်ကစား သူတို့တွင် ဘုံတူညီသော အချက်အလက်များစွာ ရှိနေသည် ဆိုသည်ကို နှစ်ဘက်စလုံးက သိမြင်လာခဲ့ကြသည်။ အခြေခံ အကျဆုံး လူ့အခွင့်အရေးကို ပြောင်ပြောင်တင်းတင်း ချိုးဖောက်နေခြင်းနှင့် ပြုံယမ်း၏ နူကလီးယား လက်နက် အစီအစဉ်များကြောင့် နှစ်နိုင်ငံစလုံးမှာ နိုင်ငံတကာ၏၊ အထူးသဖြင့် အမေရိကန်၏ မကြုံစဖူးသော ပြစ်တင်ရှုတ်ချမှုကို ခံနေရသည်။ မြန်မာ နိုင်ငံအတွက်လည်း တိုးပွါးလာနေသော မြို့ပြ အုံကြွမှုများနှင့် နယ်စပ်ရှိ တိုင်းရင်းသား သူပုန်များကို နှိမ်နင်းရန် အတွက် စစ်လက်နက် ပစ္စည်းများ ပိုမို လိုအပ်လာနေသည်။ မြောက်ကိုရီးယား ကလည်း ရိက္ခာ၊ ရာဘာ နှင့် အခြား အခြေခံ ကုန်စည်များကို လိုအပ်နေသည်၊ ဘာတာစနစ်ဖြင့် ရောင်းဝယ် လိုလျှင်လည်း လက်ခံလိုသည်။ ဤအချက်သည် ငွေကြေး ချို့တဲ့နေသော မြန်မာ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများ အတွက် အကိုက်ပင် ဖြစ်သည်။ `သူတို့ချင်း ကျောချင်းကပ်ပြီး အပြန်အလှန် အကာအကွယ် ပေးဘို့ အသင့်ပြင်ထားကြတာ` ဟု ဘန်ကောက်အခြေစိုက် အနောက်တိုင်း သံတမန်တဦးက ပြောသည်။ `မြန်မာဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေက အမေရိကန်ကို အာခံရဲလို့ ဆိုပြီး မြောက်ကိုရီးယား တွေကို သဘောကျတယ်၊ သူတို့လဲ ဒီလို လုပ်ချင် နေကြတယ်`။
အပြန်အလှန် လျှို့ဝှက် လည်ပတ်မှုများ ပြုလုပ်ပြီးနောက် မြောက်ကိုရီယား လက်နက်များ မြန်မာနိုင်ငံသို့ စတင် ရောက်ရှိလာခဲ့သည်။ ဤထူးခြား ဆန်းကြယ်သော မြန်မာနှင့် မြောက်ကိုရီးယား နှစ်နိုင်ငံအကြား ဆက်ဆံမှုကို အရှေ့ဖျား စီးပွါးရေးစာစောင် (FEER) က ၂ဝဝ၃ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁ဝ ရက် နေ့တွင် ပထမဆုံး ဖော်ထုတ်လိုက်သည်။ ၁၅ ယောက် အယောက် ၂ဝ ခန့်ရှိသော မြောက်ကိုရီးယား ပညာရှင်များကို မြို့တော်ဟောင်း ရန်ကုန်ရှိ ထိုအချိန်က အစိုးရ ဧည့်ဂေဟာတခု၌ မြင်တွေ့ ခဲ့ရသည်။ ၁၉၈၃ ခုနှစ်က ဖြစ်ပွါးခဲ့သော ရန်ကုန်မြို့ ဗုံးပေါက်ကွဲမှုကြောင့် ထိုသတင်းကို သံသယဖြင့် ကြည့်မြင် ခဲ့ကြသည်။ သို့သော် ၂ဝဝဝ စုနှစ် အစပိုင်းတွင် မြန်မာနိုင်ငံ၌ မြောက်ကိုရီး ယားမှ စစ်မြေပြင်သုံး အမြောက်ကြီးများ မြင်တွေ့ရသော အခါတွင်မှ မြောက်ကိုရီးယား နိုင်ငံသည် မဟာမိတ်သစ် တရပ်ကို ရှာဖွေ တွေ့ရှိသွားခဲ့ပြီ ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်းသွားခဲ့သည်။ ယင်းမှာ နှစ်နိုင်ငံ သံတမန် အဆက်အသွယ် ပြန်လည် ထူထောင်သည့် ၂ဝဝ၇ ခုနှစ်ဧပြီလ မတိုင်မီ နှစ်ပေါင်းများစွာ ကတဲက ဖြစ်ပျက်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
`၁၉၅ဝ စုနှစ်များက ရုရှပုံစံကို အခြေံခံထားတာ ဖြစ်ပေမဲ့ ဒီလက်နက်တွေ (အမြောက်ကြီး) တွေက စိတ်ချရတယ်၊ စစ်ပွဲတွေမှာ အစစ်ဆေး အစမ်းသပ် ခံပြီးသား ဖြစ်တယ်` ဟု သြစတြေလျ လူမျိုး မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ပညာရှင် Andrew Seth က ၂ဝဝ၄ ခုနှစ်က သြစတြေလျနိုင်ငံ အမျိုးသား တက္ကသိုလ်သို့ တင်သွင်းသော စာတန်းတွင် ရေးသား ဖော်ပြထားသည်။ `ဤလက်နက်များကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံက အင်အားချည့်နဲ့နေသော တာဝေးပစ် အမြောက်လက်နက် ကြီးများ၏ စွမ်းဆောင်ရည်တွင် သိသိသာသာ တိုးတက်မှု ရရှိသွားခဲ့သည်` ဟု ရေးသားထားသည်။ ထိုအချိန်ကတဲက မြန်မာနိုင်ငံသည် မြောက်ကိုရီးယား နိုင်ငံမှ ယာဉ်တင်ဒုံးပစ် လောင်ချာများ၊ တရုတ်ပြည်မှ ရရှိထားသော စစ်သင်္ဘောများတွင် တပ်ဆင် အသုံးပြုရန် အတွက်ဟု ယူဆရသော မြေပြင်မှ ဝေဟင်ပစ် ဒုံးကျည်များကိုလည်း ဝယ်ယူ တင်သွင်းခဲ့သည်။
ထို့နောက် လှိုဏ်ခေါင်းတူး ကျွမ်းကျင်သူများ ရောက်ရှိလာပြန်သည်။ ဇီဝနှင့် ဓါတုလက်နက် အစီအစဉ်များ အပါအဝင် မြောက်ကိုရီးယား နိုင်ငံ၏ ကာကွယ်ရေး စက်ရုံ အများစုနှင့် အခြား စစ်တပ်နှင့် အစိုးရ အဆောက်အအုံများကို မြေအောက်တွင် တည်ဆောက်ထားခြင်း ဖြစ်သည်။ ဤစက်ရုံများထဲတွင် လူသိထားပြီး ဖြစ်သော စက်ရုံများဖြစ်သည့် Ganggye, Sakchu တို့မှ စက်ရုံများ ပါဝင်သည်။ ထိုနေရာများတွင် ထောင်ပေါင်းများစွာသော ပညာရှင်များ၊ အလုပ်သမားများက တောင်အောက်တွင် ဥမင်လှိုဏ်ခေါင်းများ တူးဖော် ဖောက်လုပ်နေခဲ့ကြသည်။ ဤနည်းပညာ ကျွမ်းကျင်မှုကို မြန်မာနိုင်ငံသို့ တင်ပို့ ရောင်းချနေသည် ဆိုသည်ကို ပထမဆုံး မှတ်တမ်း တင်နိုင်ခဲ့သည်မှာ ၂ဝဝ၆ ခုနှစ် ဇွန်လက ဖြစ်သည်။ မြောက်ကိုရီးယား ဥမင်လှိုဏ်ခေါင်း တူးဖော်ရေး ကျွမ်းကျင်သူ အဖွဲ့တဖွဲ့ လုပ်ကွက်ထဲတွင် ရောက်နေပြီ ဆိုသည်ကို အတည်ပြု အကြောင်းကြားသည့် နေပြည်တော်မှ ကြေးနန်းတစောင်ကို ထောက်လှမ်းရေး အေဂျင်စီများက ကြားဖြတ် ဖမ်းမိခဲ့သည်။ ၃ နှစ် ကြာပြီးနောက် ယခုထုတ်ပြန်လိုက်သည့် ဓါတ်ပုံများသည် ဤသတင်းများ၏ မှန်ကန်တိကျမှုကို အတည်ပြု ပေးလိုက်သည်။ ယခုအချိန်တွင် ဤဥမင် လှိုဏ်ခေါင်းများသည် တောင်ကြီးမြို့က ဥမင်များ ကဲ့သို့ပင် ပြီးစီးလောက်ပြီ ဖြစ်သည်။ ဤကောင်းစွာ ဖုံးကွယ်ထားသော ဥမင်များက ၁၉၈၈-၈၉ ခုနှစ်များ အတွင်းက ဖြစ်ပွါးခဲ့သော လူထုအုံကြွမှုများ အတွင်းကလို အရပ်သားများက အစိုးရ အဆောက်အဦး များကို ဝင်စီးမည့် အန္တရာယ်မှ ကောင်းစွာ ကာကွယ်ပြီး ဖြစ်စေသည်။ နိုင်ငံတကာနှင့် ကင်းကွာနေသော စစ်အစိုးရသည် ဤနက်နက် တူးထားသော ကတုတ်များကို အာဖဂန်ရှိ တာလီဘန်များနှင့် အီရတ်ရှိ ဆက်ဒမ် ဟူစိန်အစိုးရ တို့လို လေကြောင်းမှ တိုက်ခိုက်လာလျှင်လည်း နောက်ဆုံးအဆင့် အနေဖြင့် ကာကွယ် ခုခံနိုင်အောင် ပြုလုပ်ထားခြင်း ဖြစ်သည်ဟု သတင်းရပ်ကွက်များက ပြောပြကြသည်။ ဤလက်နက်များ အတွက် မြန်မာနိုင်ငံက ဘာတွေ ဘယ်မျှ ပေးလိုက်ရသည် ဆိုသည်မှာမူ မရှင်းလင်းသေးပါ။ ဖြစ်နိုင်သည်မှာမူ မြန်မာနိုင်ငံ မြောက်ပိုင်း မြစ်အောက် ကြမ်းပြင်တွင် ရှိနေသော ရွှေများ၊ သို့မဟုတ် စားနပ်ရိက္ခာတို့ဖြင့် လဲလှယ်ခဲ့ရခြင်း ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ သို့မဟုတ် အခြားသတ္တုများလည်း ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံသည် မြောက်ကိုရီယား၏ ဥမင်လှိုဏ်ခေါင်း စီးပွါးရေးအတွက် တခုတည်းသော ဖောက်သည်နိုင်ငံတော့ မဟုတ်ပါ။
၂ဝဝ၆ ခုနှစ် စစ်ပွဲအပြီးတွင် ဟစ်ဇဘိုလာ စစ်သွေးကြွများ စွန့်ခွါသွားခဲ့သော မြေအောက် အဆောက်အအုံ အတော်များများကို အစ္စရေးနှင့် ကုလသမဂ္ဂ တပ်ဖွဲ့များက လက်ဘနွန်နိုင်ငံ တောင်ပိုင်းတွင် ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ တိုက်ဆိုင်သည် လားတော့ မသိ၊ ဤဥမင်များနှင့် အစည်းအဝေးများ ကျင်းပနိုင် လောက်အောင် ကျယ်ဝန်းသော မြေအောက် အခန်းကျယ် ကြီးများသည် တောင်နှင့်မြောက် ကိုရီးယားနှစ်နိုင်ငံကို ပိုင်းခြားထားသေား စစ်မဲ့ဇုံအတွင်း တောင်ကိုရီးယား တပ်ဖွဲ့များက ဖော်ထုတ် တွေ့ရှိခဲ့သည့် ဥမင်များ၊ မြေအောက်ခန်းများနှင့် တထေရာတည်း တူနေသည်။ မြက်ခင်းများ၊ ခြံပုတ်များအတွင်း ကွယ်ဝှက်ထားသော မြောင်းဖုံး လူဝင်ပေါက်အရွယ် သေးငယ်သော အပေါက်ကလေးများမှ ဆင်းသွားလျှင် သံမဏိဖြင့် အချောကိုင်ထားသော မြေတွင်း ဥမင်များမှ တဆင့် အခန်းကျယ်ကြီးများ အတွင်းသို့ ရောက်ရှိ သွားနိုင်သည်။ ထိုအခန်းကျယ် ကြီးများတွင် လျှပ်စစ်၊ လေဝင်လေထွက် စနစ်၊ ရေပန်း တပ်ဆင်ထားသည့် ရေချိုးခန်းများနှင့် ရေမြောင်းစနစ် ပါဝင်သော အခန်းကျယ်ကြီးများ အတွင်းသို့ ရောက်ရှိသွားသည်။ အချို့သော ဥမင်များကို မီတာ ၄ဝ အနက် အစ္စရေး နယ်စပ်မှ မီတာ ၁ဝဝ အကွာခန့်တွင် တွေ့ရှိခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ဤဥမင်များ တူးဖော်ရာတွင် မြောက်ကိုရီးယားတို့ ပါမပါဆိုသည်ကို ဆန်းစစ်ရန်မှာမူ ခက်ခဲပါသည်။ အစ္စရေး စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး သတင်းသမား (Investigative Journalist) Ronen Bergman ၏ အဆိုအရမူ အနောက်သို့ ကူးပြောင်း ခိုလှုံလာသော အီရန် တော်လှန်ရေး အစောင့်တပ် အကြီးတန်း အရာရှိတဦး၏ အပြောအရ `ရာပေါင်းများစွာသော အီရန်ပညာရှင်များနှင့် အင်ဂျင်နီယာများ၊ အီရန် သံတမန်များက ခေါ်ယူလာခဲ့သော မြောက်ကိုရီးယား ကျွမ်းကျင်သူများကြောင့် ဟစ်ဇဘိုလာတို့သည် လက်ဘနွန် တောင်ပိုင်းတွင် ၂၅ ကီလိုမီတာရှည် မြေအောက်လမ်းမ တခုကို အောင်မြင်စွာ ဖောက်လုပ် နိုင်ခဲ့သည်`ဟု ဆိုသည်။
ဘေရွတ် သတင်းရပ်ကွက်များ၏ ယူဆချက်အရမူ ဟစ်ဇဘိုလာ တို့သည် သူတို့ကို ဆီးရီးယားနှင့် အီရန် မဟာမိတ်များက ပေးအပ်ခဲ့သော မြောက်ကိုရီးယား ဒီဇိုင်းနှင့် ပုံစံပြာတို့ကို အသုံးပြု တည်ဆောက်ခြင်း ဖြစ်ဘို့ ပိုများသည်ဟု ဆိုသည်။ ဤနှစ်နိုင်ငံ စလုံးမှာ မြောက်ကိုရီးယားနှင့် နီးစပ်သော နိုင်ငံများ ဖြစ်ကြသည်။ (အီရန်နှင့် ဆီးရီးယား နှစ်နိုင်ငံစလုံးသည် မြောက်ကိုရီးယား နိုင်ငံမှ ဒုံးပျံ နည်းပညာကို ရရှိခဲ့သည်။ မြောက်ကိုရီးယား အကူအညီဖြင့် တည်ဆောက် ခဲ့သည်ဟု ယုံကြည်ရသော ဆီးရီးယားနိုင်ငံရှိ အနုမြူ ဓါတ်ပေါင်းဖိုကို အစ္စရေး လေတပ်က ၂ဝဝ၇ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ အတွင်း တိုက်ခိုက် ဖျက်ဆီးပစ်ခဲ့သည်) မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ မြောက်ကိုရီးယား၏ ဥမင်လှိုဏ်ခေါင်းဖောက် အတတ်ပညာသည် ပို့ကုန်ဈေးကွက်တွင် တန်ဘိုးရှိ ကုန်စည်တရပ် ဖြစ်လာနေခဲ့သည်။ နိုင်ငံတကာမှ အပယ်ခံ အာဏာရှင်များကို ကူညီ လုပ်ဆောင်ပေးနေသ၍ ငွေပေးချေမှု အပိုင်းတွင် မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံက အလွန် ပျော့ပျောင်းပါသည်။
Posted by ၀ိမုတ္တိ at 8:40 AM ,0comments
ဘန်ကောက်။ ။ ကမ္ဘာ့ စီးပွါးပျက်ကပ်ကြောင့် မမျှော်လင့်သော သားကောင် တကောင် ပေါ်လာသည်။ ယင်းမှာ မြောက်ကိုရီးယား နိုင်ငံက အရှေ့တောင်အာရှ တလွှား ဖွင့်ထားသော စားသောက်ဆိုင်များပင် ဖြစ်သည်။ လွန်ခဲ့သော လအနည်းငယ် အတွင်းက အဆိုပါ ဆိုင်များမှာ `လတ်တလော စီးပွါးရေး အခြေအနေကြောင့်´ ပိတ်လိုက်ရသည် ဟု ထိုင်းနိုင်ငံမြို့တော် ဘန်ကောက်ရှိ အာရှ သံတမန်တဦးက ပြောသည်။ ဤအချက်က ဒေသတွင်း စားသောက်ဆိုင်များ၊ အခြားရှေ့တန်း ဟန်ပြ လျှို့ဝှက် ကုမ္ပဏီများ ဖွင့်လှစ် လုပ်ကိုင်နေသည့် မြောက်ကိုရီးယား အလုပ်သမား ပါတီ၏ နိုင်ငံတကာ ငွေကြေးရှာဖွေရေး ဌာနခွဲဖြစ်သော အမှတ် ၃၉ ဗျူရိုသည် ငွေကြေးများ ပြတ်လပ်နေပြီ ဟူသည့် အဓိပ္ပါယ် ဆောင်ပါသည်။ အကယ်၍ ဤစီးပွါးရေး လုပ်ငန်းများသည် ငွေကြေး ခဝါချရန် သက်သက်သာ တည်ထောင်ထားသည် ဆိုလျှင်ပင် ဤလုပ်ငန်းများ၏ လည်ပတ်စရိတ် နှင့် ငွေကြေးစီးဆင်းမှုမှာ သူတို့ ရပ်တည် ရှင်သန်နိုင်ရေး အတွက် အရေးကြီးမြဲ ကြီးပါသည်။ သူတို့ စားသောက်ဆိုင်များ၏ အဓိက ဖောက်သည်များမှာ အထီးကျန် မြောက်ကိုရီးယား နိုင်ငံ၏ ရှားရှားပါးပါး နှစ်သိမ့်စရာ အစားအသောက်များကို လာရောက်ရှာဖွေ စားသောက်ကြသည့် တောင်ကိုရီးယား ကမ္ဘာလှည့် ခရီးသည်များ ဖြစ်သည်။ စားပွဲထိုး မိန်းကလေးများမှာ သေချာဂရုတစိုက် ရွေးချယ်ထားသည့် ငယ်ရွယ် နုပျို၍ ရိုးရာကိုရီးယား အဝတ်အစားများ ဝတ်ဆင်ထားကြသည့် မိန်းမပျို ကလေးများ ဖြစ်သည်။ သူတို့သည် လာရောက်သော ဧည့်သည်များကို သီချင်းများ အကများဖြင့်လည်း ဖျော်ဖြေကြသည်။
ကမ္ဘာ့စီးပွါးရေး အကြပ်အတည်းကြောင့် တောင်ကိုရီးယား လူမျိုး ကမ္ဘာလှည့် ခရီးသည် အရေ အတွက်သာ ကျဆင်းသွားသည် မဟုတ်၊ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်ငွေ၏ တန်ဘိုးမှာလည်း ကျဆင်းသွားခဲ့ရာ ထိုငွေကြေး၏ ဝယ်နိုင်အားလည်း ကျဆင်းသွားခဲ့ရသည်။ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်ငွေသည် ၂ဝဝ၈ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလက အမေရိကန် တဒေါ်လာလျှင် ၉၄၂ ရှိနေရာမှ ဖေဖော်ဝါရီလတွင် ၁၅ဝ၆ အထိ ကျဆင်းသွားခဲ့သည်။ အသေးစိတ် စာရင်းအင်းများ မရရှိသော်လည်း ထိုင်းနိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိလာသော တောင်ကိုရီးယား လူမျိုး ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည် အရေအတွက်မှာ ၂၅ ရာနှုံး ကျဆင်းသွားခဲ့သည်။ ထိုင်းနိုင်ငံသည် သူတို့အတွက် အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများ ဖြစ်သော ကမ္ဘောဒီးယားနှင့် လာအိုတို့သို့ သွားရောက်ရာ တံခါးပေါက်လည်း ဖြစ်သည်။
မိမိနိုင်ငံတွင် ဒေါင်ဒေါင်မြည် ဆိုရှယ်လစ်ဖြစ်သော်လည်း မြောက်ကိုရီးယား နိုင်ငံသည် နိုင်ငံရပ်ခြားတွင် အရင်းရှင် စီးပွါးရေးလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ရာ၌ အောင်မြင်လှသည်။ ထိုလုပ်ငန်းများမှ ပြုံယမ်း၏ ဘဏ္ဍာတိုက်တွင်းသို့ နိုင်ငံခြား ငွေကြေးများ ပုံမှန် စီးဆင်းနေစေသည်။ မြောက်ကိုရီးယားသည် ကုန်သွယ်ရေး ကုမ္ပဏီများကို ထိုင်း၊ ဟောင်ကောင်၊ မကာအို၊ ကမ္ဘောဒီးယား နိုင်ငံတို့တွင် ဖွင့်လှစ်ထားကာ မြောက်ကိုရီးယား ကုန်စည်များကို ဒေသတွင်း နိုင်ငံများသို့ တင်ပို့ ရောင်းချနေသည်။ အများစုမှာ အဝတ်အထည်၊ ပလပ်စတစ်၊ ကြေးနီ ကဲ့သို့သော သတ္တုများ ဖြစ်ကြသည်။ တချိန်တည်းတွင် အစားအစာ အမျိုးမျိုး၊ အပေါ့စား စက်ပစ္စည်းများ၊ အီလက်ထရောနစ် ပစ္စည်းများကို တင်သွင်းခဲ့သည်။ ယခင်ကမူ အရပ်ဘက်ရော စစ်ရေးဘက်တွင်ပါ အသုံးပြုနိုင်သည့် နှစ်ဘက်သုံး ဓါတုပစ္စည်းများကို တင်သွင်းခဲ့သည်။ ဤကုမ္ပဏီ အားလုံးသည် အင်အား ကြီးမားလှသော Daesong Group က လည်ပတ် လုပ်ကိုင်နေသော လုပ်ငန်းများဖြစ်ပြီး လျှို့ဝှက် သိပ်သည်းလှသော အမှတ် ၃၉ ဗျူရို လက်အောက်ခံလည်း ဖြစ်သည်။
၁၉၈ဝ စုနှစ်များ နှောင်းပိုင်းနှင့် ၁၉၉ဝ စုနှစ်များအတွင်း ကွန်မြူနစ် မဟာမိတ် ဟောင်းများနှင့် ကုန်သွယ်ရေး အဆက်အဆံများ ရပ်ဆိုင်းသွားပြီး အလွန်ပြင်းထန်သည့် အကြပ်အတည်းကို ကြုံရပြီးနောက် မြောက်ကိုရီးယား နိုင်ငံသည် ဤအရင်းရှင် စီးပွါးရေး လုပ်ငန်းများကို ပြောင်းလဲ လုပ်ကိုင် လာခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ပိုပြီး ထိခိုက်စရာ ဖြစ်လာသည်မှာ ၁၉၉ဝ ခုနှစ်တွင် ယခင် ဆိုဗီယက် ယူနီယံက၎င်း၊ ၁၉၉၃ ခုနှစ်တွင် တရုပ်နိုင်ငံက၎င်း သူတို့ ရောင်းချသော ကုန်စည်များကို နိုင်ငံတကာ စံဈေးနှုံးများ အတိုင်း ငွေမာဖြင့် ပေးချေရန် တောင်းဆို လာခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်၊ ယခင် ကုန်ချင်း လဲလှယ်သည့် ဘာတာစနစ်ကို လက်မခံတော့။ အလားတူ နိုင်ငံရပ်ခြားရှိ သံရုံးများကိုလည်း မြောက်ကိုရီးယား နိုင်ငံက အရေးတကြီး လိုအပ်နေသော နိုင်ငံခြား ငွေကြေးများ ရှာဖွေ ခိုင်းခဲ့သည်ဟု မြောက်ကိုရီးယား နိုင်ငံအတွင်း ဖြစ်ထွန်းသမျှကို လေ့လာနေသော ဘန်ကောက် အခြေစိုက် အနောက်တိုင်း သံတမန်တဦး အပြောအရ သိရသည်။ `ငွေဘယ်လိုရတယ် ဆိုတာက အရေးမကြီးဘူး၊ တရားဝင်ရော၊ တရားမဝင်ရော နည်းပေါင်းစုံနဲ့ လုပ်လို့ ရတယ်။ သူတို့က မကြာခဏ သံတမန် အထူးအခွင့်အရေးကို အလွဲသုံးစား လုပ်ကြတယ်´ ဟု အဆိုပါ သံတမန်က ပြောသည်။
မြောက်ကိုရီးယား နိုင်ငံ၏ အဓိက ရှေ့တန်းဟန်ပြ ကုမ္ပဏီများ ဖြစ်ကြသော Star Bravo နှင့် Kosun Import-Export ကုမ္ပဏီတို့မှာ ယနေ့တိုင် ထိုင်းနိုင်ငံတွင် လည်ပတ် လုပ်ကိုင်နေဆဲ ဖြစ်သည်။ ၂ဝဝဝ စုနှစ်များအစော ပိုင်းတွင် တရုတ်နှင့် တောင်ကိုရီးယား နိုင်ငံတို့ ပြီးလျှင် မြောက်ကိုရီးယားသည် ထိုင်းနိုင်ငံ၏ တတိယအကြီးဆုံး ကုန်သွယ်ဖက်နိုင်ငံ ဖြစ်လာခဲ့သည်။ မြောက်ကိုရီးယား သံတမန်များက ဇိမ်ခံကားများ၊ အရက်နှင့် စီးကရက်များ တို့ကို ထိုင်းနိုင်ငံ အတွင်းသို့ အကောက်ခွန်မဲ့ တင်သွင်းလာသည်ကို အနောက်နိုင်ငံ ထောက်လှမ်းရေး အရာရှိများက သတိပြု မိလာကြသည်။ ဘန်ကောက်သည် ဤသို့သော ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး လုပ်ငန်းများ၏ ဗဟိုဌာနချုပ် ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ပိုထူးသော လုပ်ငန်းတရပ်မှာ ဘန်ကောက်ရှိ မြောက်ကိုရီးယား လူမျိုးများက တပတ်ရစ် မိုဘိုင်းဖုံးများကို ဝယ်ယူ၍ သံတမန် ချောအိတ်များ သုံးပြီး ဘင်္ဂလာဒေ့ရှ် နိုင်ငံသို့ တင်ပို့ကာ အသစ် မဝယ်နိုင်သော ဖောက်သည်များအား ရောင်းချနေခြင်း ဖြစ်သည်။ ၂ဝဝ၁ ခုနှစ် အစပိုင်းတွင် အရည်အသွေးမြင့် အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၁ဝဝ တန် ငွေစက္ကူများ ဘန်ကောက်တွင် ပေါ်ထွက် လာခဲ့သည်။ ဤကိစ္စအတွက် မြောက်ကိုရီးယား သံရုံးတွင် တာဝန်ရှိသည်ဟု ထိုအချိန်က တာဝန်ယူခဲ့သော ရဲတပ်ဖွဲ့က ပြောကြားခဲ့သည်။ ထိုင်းနိုင်ငံတွင်းရှိ ဒေသခံ ဘဏ်များတွင် အဆိုပါ သံအရာရှိများ ဒေါ်လာငွေ အတုများ အပ်နှံရန် ကြိုးပန်းသည်ကို ဖမ်းမိခဲ့ပြီး၊ သူတို့ကို နောက်မလုပ်ရန် သတိပေးခဲ့သည်။
စားသောက်ဆိုင်များမှာမူ ပြုံယမ်း အစိုးရအတွက် နောက်ထပ် ငွေကြေးများ ရှာဖွေရာတွင် အသုံးပြုသည်။ တချိန်တည်းတွင် မြောက်ကိုရီးယား နိုင်ငံ၏ မသတီစရာ စီးပွါးရေး လုပ်ငန်းများမှ ရရှိသော ငွေကြေးများ ခဝါချ ရာတွင်လည်း အသုံးပြုနေသည်ဟု သံသယရှိစရာ ဖြစ်နေသည်။ စားသောက်ဆိုင်များနှင့် အခြားငွေသား အသားပေး စီးပွါးရေး လုပ်ငန်းများကို ဘဏ်များက အပ်နှံငွေအဖြစ် လက်မခံသည့် ငွေအစုလိုက် အပုံလိုက်ကို လက်ခံရာ ကြားခံအဖြစ် အများအားဖြင့် အသုံးပြုနေသည်။
မြောက်ကိုရီးယား စားသောက်ဆိုင် အများအပြားကို ပီကင်း၊ ရှန်ဟဲနှင့် အခြား တရုတ် မြို့ကြီးများတွင် နှစ်ပေါင်း များစွာ ကတဲက ဖွင့်လှစ် လုပ်ကိုင်လာခဲ့သည်။ သို့သော် အရှေ့တောင် အာရှတွင် ပထမဆုံးသော အဆိုပါ စားသောက်ဆိုင်ကို ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ Siem Reap မြို့၌ ၂ဝဝ၂ ခုနှစ်က ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။ အန်ကောဝပ် ဘုရားကျောင်း အပြိုအပျက်များကို လာရောက် လေ့လာ ကြည့်ရှုကြသည့် တောင်ကိုရီးယား ကမ္ဘာလှည့် ခရီးသည် ထောင်ပေါင်း များစွာကြောင့် အဆိုပါ စားသောက်ဆိုင်မှာ ချက်ချင်း အောင်မြင်သွားခဲ့သည်။ ထိုဆိုင် အောင်မြင် သွားသောကြောင့် ဒုတိယ စားသောက်ဆိုင်ကို မြို့တော် ဖနွမ်းပင်တွင် ၂ဝဝ၃ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ က ထပ်မံ ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။ အတော်အတန် ကြီးမားသော အဆိုပါ စားသောက်ဆိုင်တွင် သိပ် မထူးခြားလှသော ကိုရီးယား လူမျိုးတို့၏ အဓိက အစားအစာ ကင်ချီ (Kimchi) နှင့် အခြား ဟင်းလျာများကို ရောင်းချပြီး မြောက်ကိုရီးယား စားပွဲထိုး အမျိုးသမီးလေးများက အဆိုအကများဖြင့် ဖျော်ဖြေသည်။ အဆိုပါ ဆိုင်ကို စီးပွါးရေး မကောင်းသောကြောင့် ယခုနှစ် အစောပိုင်းက ပိတ်ခဲ့ရသည်။
နောက်ထပ် ပြုံယမ်းစားတော်ဆက် ဟုခေါ်သည့် စားသောက်ဆိုင် တဆိုင်ကို ဘန်ကောက်မြို့တွင် ၂ဝဝ၆ ခုနှစ်က ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါ စားသောက်ဆိုင်ကို အနောက် နိုင်ငံသားများ အရောက်အပေါက် နည်းသည့် ဘန်ကောက်ဆင်ခြေဖုံး Pattanakan အရပ် လမ်းကြားတွင် အထူး ဆောက်လုပ် ထားသော ကောင်းမွန်ခန့် ငြားလှသည့် အဆောက်အဦး၌ ဖွင့်လှစ်ထားသည်။ သို့သော် ထိုအရပ်သည် မြောက်ကိုရီးယား သံရုံးနှင့် အခြား ဘန်ကောက်မြို့ရှိ ရှေ့တန်းဟန်ပြ ကုမ္ပဏီများ ဖွင့်လှစ်ထားရာ နေရာနှင့်မူ နီးသည်။ နောက်ထပ် အလားတူ စားသောက်ဆိုင် တဆိုင်ကို ပို၍ပင် ခမ်းနားစွာ ထိုင်းနိုင်ငံ၏ နာမည်ကျော် ပင်လယ်ကမ်းခြေ အပန်းဖြေ စခန်းမြို့ ဖြစ်သော ဖတ်တယား (Pattaya) ၌ ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။ သီးခြား အဆောက်အဦး ဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွား ဘတ်စ်ကားများ ရပ်နားရန် အလွန်ကြီးမားသော ကားရပ်စခန်း တခုကိုပါ အပြင်တွင် တပါတည်း ထည့်သွင်း တည်ဆောက် ထားသည်။ ထိုစားသောက်ဆိုင်ထက် အများကြီးငယ်သော စားသောက်ဆိုင်ကိုမူ လာအို နိုင်ငံ၏ အိပ်မောကျနေသည့် ပျင်းရိငြီးငွေ့ဘွယ် ကောင်းသော ဗီယင်ကျန်း မြို့တော်၌ ဖွင့်လှစ်ထားသည်။ ထိုစားသောက်ဆိုင်မှာမူ တောင်ကိုရီးယား ကမ္ဘာလှည့် ခရီးသည်များကြောင့် ထင်ရှာလာခြင်း မဟုတ်ဘဲ တရုတ်လူမျိုး ပညာရှင်များနှင့် ဧည့်လုပ်သားများ လာရောက် စားသောက်ကြခြင်း ဖြစ်သည်။ မြောက်ကိုရီးယား နိုင်ငံ၏ ဆက်လက် လည်ပတ် လုပ်ကိုင်နေဆဲ စားသောက်ဆိုင်မှာ ဗီယင်ကျန်း စားသောက်ဆိုင် တဆိုင်သာ ဖြစ်ပါလိမ့်မည်။
မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံ၏ ငွေတုလုပ်ငန်းနှင့် မှောင်ခိုစီးပွါးရေး လုပ်ငန်းများကို နှစ်ပေါင်းများစွာ စောင့်ကြည့် နေခဲ့ပြီးနောက် အမေရိကန် နိုင်ငံက ပြုံယမ်း၏ ဘဏ္ဍာရေး လုပ်ငန်းများကို ၂ဝဝ၅ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလတွင် ဝက်အူ တင်းတင်း ကြပ်ခဲ့သည်။ ဤလုပ်ရပ်မှာ မကာအိုရှိ ဒေသခံ ဘဏ်တခု ဖြစ်သော Banco Delta Asia ကို ´ငွေကြေးခဝါချမှု လုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်နေသည်ဟု အဓိက စိုးရိမ် ပူပန်စရာ ဘဏ္ဍာရေး အဖွဲ့အစည်း´ အဖြစ် သတ်မှတ် ခံလိုက်ရပြီးနောက် ပေါ်ထွက်လာခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ဘဏ်မှာ ပြိုလဲလုနီးပါး ဖြစ်သွားပြီး မြောက်ကိုရီးယား နိုင်ငံ၏ ပိုင်ဆိုင်မှု အားလုံကိုလည်း ထုတ်မရအောင် လုပ်ထားခြင်း ခံလိုက်ရသည်။ ၆ နိုင်ငံ ဆွေးနွေးပွဲတွင် မြောက်ကိုရီးယား နိုင်ငံ၏ အလျှော့ပေး လိုက်လျောလာမှုများကို မက်လုံးပေးသည့် အနေနှင့် အဆိုပါ ပိုင်ဆိုင်ခွင့် (ရရန်ပိုင်ခွင့် Assets)များကို မြောက်ကိုရီးယား နိုင်ငံသို့ ရုရှ အရှေ့ဖျားရှိ ဘဏ်မှတဆင့် တဖြေးဖြေး ပြန်လည် လွှဲပြောင်း ပေးခဲ့သည်။ ကုလသမဂ္ဂ၏ အရေးယူ ပိတ်ဆို့မှုများနှင့် ပေါင်းစပ် လိုက်သောအခါ မြောက်ကိုရီးယား နိုင်ငံ၏ ပင်လယ်ရပ်ခြား ဘဏ္ဍာရေး ကွန်ရက်မှာ ထိခိုက် ပျက်စီးသွားတော့သည်။ ပြုံယမ်း ၏ ပင်လယ်ရပ်ခြား ရှေ့တန်းဟန်ပြ ကုမ္ပဏီ အများအပြားမှာ လွတ်လွတ်လပ်လပ် လုပ်ကိုင်ခွင့် မရတော့။ ဥပမာ အားဖြင့် ထိုင်းနှင့် မြောက်ကိုရီးယား နိုင်ငံတို့ အကြား အပြန်အလှန် ကုန်သွယ်မှု ပမာဏမှာ ၂ဝဝ၆ ခုနှစ်တွင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၃၄၃ သန်းအထိ အမြင့်ဆုံးသို့ ရောက်ရှိခဲ့ရာမှ စတင် ကျဆင်း သွားခဲ့သည်။ ၂ဝဝ၇ ခုနှစ် တွင် အမေရိကန် ဒေါ်လာ သန်း ၁ဝဝ သို့ ကျဆင်းသွားပြီး ၂ဝဝ၈ ခုနှစ်တွင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၇ဝ.၈ သန်း သာ ရှိတော့သည်။
ယခု မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံက ဒုတိယအကြိမ် နျူးကလီးယား လက်နက် စမ်းသပ် ဖောက်ခွဲမှုများ ပြုလုပ်၍ ဒုံးကျည်များ ပစ်လွှတ် စမ်းသပ် ခဲ့ပြီးနောက် ဝါရှင်တန်က မြောက်ကိုရီးယား နိုင်ငံကို အကြမ်းဖက် ဝါဒ ထောက်ခံ အားပေးသော နိုင်ငံအဖြစ် ပြန်လည် သတ်မှတ်မည့် အလားအလာများ တဖန် များလာပြန်ပြီ ဖြစ်သည်။ ဤသို့ ဖြစ်လာပါက ပုဂ္ဂလိက ကုမ္ပဏီ အများအပြားမှာ ပြုံယမ်းနှင့် စီးပွါးရေး လုပ်ကိုင်လျှင် အမေရိကန် ဘဏ္ဍာရေးဌာန၏ နာမည်ပျက် စာရင်း သွင်းခံရမည်ကို စိုးရိမ်ရ၍ တွဲဖက် စီးပွါးရေး လုပ်ကိုင်ရန် ဝန်လေးသွားကြမည် ဖြစ်သည်။
ဤသို့ ငွေရှာပေးနေသည့် စီးပွါးရေးလုပ်ငန်း အများအပြား ပျက်ကိန်း ကြုံနေရသဖြင့် ပြုံယမ်းမှာ ဖိအားများ ပိုမို ခံလာနေရသည်။ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ဘဏ္ဍာရေး အကြပ်အတည်း ကလည်း မြောက်ကိုရီးယား နိုင်ငံကို နောက်ထပ် ချောင်ပိတ်ခံရအောင် လုပ်လိုက်သလို ဖြစ်နေသည်။ နိုင်ငံရပ်ခြားရှိ မြောက်ကိုရီးယား နိုင်ငံ၏ စီးပွါးရေး လုပ်ငန်းများမှ ရရှိငွေများကို တိုင်းပြည်ရှိ လူမှုဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများတွင်သော်၎င်း၊ တိုင်းပြည်တွင်းရှိ အစာရေစာ ငတ်ပြတ်နေသော ပြည်သူလူထု၏ ထမင်းစားပွဲပေါ်တွင် စားစရာများ တင်ပေးလိမ့်မည်ဟုသော်၎င်း၊ အခြား အခြေခံ လိုအပ်ချက်များ ဖြည့်ဆည်းပေးလိမ့်မည် ဟုသော်၎င်း မျှော်လင့်၍ မရနိုင်ပါ။ ဒေသတွင်းရှိ တောင်ကိုရီးယား ကမ္ဘာလှည့် ခရီးသည်များအား ရောင်းချရန် အစားအသောက်ပင် မရှိတော့ပါ။
Posted by ၀ိမုတ္တိ at 8:37 AM ,0comments